Yemen:29 mayd oo laga heley xeebta Yaman - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Yemen:29 mayd oo laga heley xeebta Yaman
10.09.2008 | Yemen, Abyan iyo Shabwa
Nayroobi, 10 Sebtembar 2008 – Koox hay’adda Médecins Sans Frontières (MSF) ka socota ayaa 8 mayd shaley oo Sebtembar ahayd 9ka ka heley xeebta Wadi Al-Barakin oo dalka Yaman (30 km bari kaga beegan Axwar). Dadkaan, oo ahaa qaxooti iyo muhaajiriin ka soo baxsaday iskahorimaadka iyo saboolnimada ba’an ee ka jirta Geeska Afrika, ayaa isku dayayey in ay ka soo gudbaan Gacanka Cadan. Maalinta inteedii kale, ayaa 21 mayd oo kale baddu soo caaridey badda, taas oo wadarta dadka dhintey ka dhigtey 29. Sida ay sheegeen kuwii badbaadey, 10 qof oo kale ayaa dhintey intii ay safarka ku soo jireen.
Waaberigii saacaddu markii ay ahayd 4.30kii (10 saac habeenimo) ayaa koox MSF ka tirsan lagu soo wargeliyey in ay dad cusub ay soo gaareen xeebta, kuwaas oo ahaa kuwii toddobaad ee xeebta soo gaara muddo sagaal maalmood ah. Markii ay kooxda MSF soo gaareen xeebta, waxa ay halkaa ku arkeen koox soo badbaaddey iyo siddeed mayd. Dadka soo badbaadey ayaa u sheegey MSF in ay doontu timid goor habeenimo ah ayna istaagtey meel aad uga fog xeebta, oo biyaheeduna ay gun-dheer yihiin. Dadkii saarnaa doonida ayaa si khasab ah oo ay rabshad wata loogu khasbey in ay ku boodaan biyaha. Badi dadka dhintey ma aqoon sida loo dabbaasho.
Dadka soo badbaadey ayaa sheegey in tahriibiyeyaashu ay ahaayeen kuwo aad u naxariis daran intii lagu soo jirey safarka. Sida ay ku sheegeen markhaati-kacyadooda, ayaa ilaa 10 qof ay dhinteen intii lagu soo jirey safarka: qaar neef-qabin ayaa ay u dhinteen, saddex ay 2 ka mid ahi ahaayeen carruur, waxaa badda ku tuurey tahriibiyeyaasha. Ilaa 120 qof ayaa saarnaa doonida markii ay safarkooda soo bilaabayeen.
Hadalkan waxa yiri qof qaxooti ah ooo 23 sano jir ah oo ka soo cararey Muqdisho:
“Tahriibiyeyaasha ayaa noogu ballanqaadey Boosaaso (Soomaaliya) in Yaman ay inoo kaxayn doonaan annaga oo kooxo yaryar ah ayna adeegsan doonaan doomo dheereeya oo cunto iyo biyo wanaagsan leh. Haseyeeshee, doontu waxa ay ahayd mid gabowdey. Hubkooda ayaa ay nagu soo jeediyeen waxaana ay nagu khasbeen in aan ku boodno oo aan korno. Waxa aan ahayn 120 qof, aadna waan isu dulsaarneyn; safarka ayaa nagu qaatey 2 maalmood. Ma aanan helin cunto, iyo biyoba; qaarkeen waxaa la geliyey godadka hoose; dhowr qof ayaa u dhintey neef-qabatin, qaar kale doonta ayaa laga tuurey, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 2 carruur ah. Si ay noo baqdin geliyaan, waxa ay si aad ah noogu qaraaceen suumankooda. Mid ka mid ah tahriibiyeyaasha ayaa batrool innagu soo tuurey waxaana uu la soo baxay laytarkiisii (dabkiisii).”
Ka dib markii gargaarka degdegga ah lagu siiyey xeebta, ayaa dadkii qaxootiga ahaa waxaa ay aadeen Xarunta Qaabilaadda ee Axwar, halkaas oo kooxaha MSF ay bixiyeen gargaar iyo la-talin caafimaad.
Hadalkan waxaa yiri Alfonso Verdú, oo ah Madaxa Ergada MSF ee Yaman:
“6dii doomood ee hore u yimid, ayaa tahriibiyeyaashu waxa ay dadka ula dhaqmeen si bani’aadamnimo ku saleysan. Waxaa aan u maleyney in ay arrimuhu isbeddeleen, ilaa aan arrintan maanta aragney. Waxyaabihii naxdinta lahaa ee dhici jirey 2007dii ayaa mar kale lagu kacayaa. Dadka ayaa ay dhibaatooyin aad u xumi ay soo gaareen. Haweeney ayaa ku weysey 3 carruur ah oo ay dhashey. Nin dhallinyaro ah oo Itoobiyaan ah ayaa indhihiisa ku arkay aabbihiis oo 70 sano jir ah oo lagu tuurayo badda goor habbeenimo ah, waxaana meydka aabbihii uu heley subaxdii xigtey. Badi dadkan waxa ay inoo sheegeen in aaney u furnayn wax aan ahayn in ay ka soo cararaan rabshadda iyo cunfiga loogu geysanayo Soomaaliya iyo Itoobiya, in kasta oo ay ogaayeen halista nafka. Waxa aan rajeyneyney in qaxooti iyo muhaajiriin badan iman doonaan – tiradii timid 2008dii ayaa ahayd laban-laab kuwii 2007dii. Laakiin ma ahan tirada oo keliya waxa kordhaya: rabshadda ayaa saddex-laabantey ilaa bilowgii Sebtembar.”
MSF waxa ay mashruuceeda bilowdey Sebtembar 2007dii, iyada oo gargaar caafimaad iyo mid bani’aadamnimo siineysa qaxootiga iyo muhaajiriinta imanaya xeebta Yaman ee gobollada Abyan iyo Shabwa. Intii lagu jirey sanadkii 2008dii, MSF waxa ay gargaar siisey dad ka badan 3,800 qof, 580 ka mid kuwan waxaa la gargaarey bishii Sebtembar. Bishii Juunyo 2008dii, MSF waxa ay soo saartey warbixin uu cinwaankeedu yahay “Wax ay Kala Doortaan Ma Lahan” si ay qoraal uga diyaariso safarka halista badan iyo si ay ugu baaqdo in la kordhiyo gargaarka la siiyo kumaan qaxooti, magangelyo-doon iyo mujaahiriin ah oo ka soo cararaya dalalkooda.
Tags: meydad, Muqdisho, Qoxooti, xeeb, Yemen
Qoraalada kale ee ku saabsan Yemen, Abyan iyo Shabwa
Koox MSF ah oo Xeebta Yaman ka heley Meydadka 35 Soomaali iyo Itoobiyaan ah
In ka badan Boqol qof oo Qaxooti Kale ah ayaa Xagga Badda ka soo Galey Yaman
WAX AY KALA DOORTAAN MA LAHAN: Qaxootiga, Magangelyo-doonka iyo Muhaarijiriinta Soomaalida iyo Itoobiyaanka ah ee Soo Goynaya Gacanka Cadan